रेखा थापा विप्लव माओवादीमा ! - बडिमालिका खबर
अभिनेत्री रेखा थापाको परिचय त अब दिइराख्नु परेन । यो खबर साप्ताहिक इकान्तिपुरमा खबर छ । झण्डैं २० बर्षअघि नेपाली चलचित्र उद्योगमा छिरेकी यि अभिनेत्री पछिल्लो समय राजनितीमा पनि सक्रिय छिन् । केहि बर्षअघि राप्रपाको केन्द्रिय सदस्यमा राम्रै मतका साथ बिजयी भएकी थापा अहिले कुन पार्टिमा छिन् ? कसैलाई पत्तो छैन ।